Dzokai kuna Mwari—“Mufudzi noMutariri weMweya Yenyu” (1 Petro 2:25)
CHIKAMU 1 “Ndichatsvaka Rakarasika”
CHIKAMU 2 Kuzvidya Mwoyo—“Tinomanikidzwa Munzira Dzose”
CHIKAMU 3 Kurwadziswa Nemumwe Munhu—Kana Tiine ‘Chikonzero Chokunyunyuta’
CHIKAMU 4 Kuzvipa Mhosva—“Ndichenesei Pachivi Changu”
CHIKAMU 5 Dzokai “KuMufudzi noMutariri weMweya Yenyu”
Dzoka Kuna Jehovha
SARUDZA MUTAURO Abua Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Basque Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Douala Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Galician Georgian German Gokana Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kachin Kannada Kazakh Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mixe Mizo Mongolian Moore Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuCuba Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuIndonesia Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venda Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Dzokai “KuMufudzi noMutariri weMweya Yenyu”
Pamatambudziko ataurwa mukabhuku kano, pane akafanana neauri kutarisana nawo here? Kana zvakadaro, hausi wega. Vamwe vashumiri vaMwari vakatendeka vekare nevemazuva ano vakatarisanawo nematambudziko akadaro. Jehovha anogona kukubatsirawo sezvaakavaita.
Jehovha achakubatsira kuti udzoke kwaari
IVA nechokwadi chekuti Jehovha achakubatsira kuti udzoke kwaari. Achakubatsira kuti usazvidya mwoyo, kuti ukanganwire zvawakatadzirwa nemumwe munhu uye kuti uve nehana yakachena iyo ichaita kuti ugadzikane mupfungwa nemwoyo. Kana zvadaro uchanzwa uchida kushumira Jehovha zvekare pamwe chete nevamwe vashumiri vake. Uchange wafanana nevamwe vaKristu vekutanga vakanyorerwa naPetro kuti: “Makanga makaita semakwai, akarasika; asi zvino madzokera kumufudzi nomutariri wemweya yenyu.”—1 Petro 2:25.
Hakuna chinhu chakanaka chaungaita chinopfuura kudzoka kuna Jehovha. Nei tichidaro? Uchaita kuti mwoyo waJehovha ufare. (Zvirevo 27:11) Sezvaunoziva, zvatinoita zvinogona kurwadza kana kufadza Jehovha. Asi kunyange zvakadaro, Jehovha haatimanikidze kuti timude uye kuti timushumire. (Dheuteronomio 30:19, 20) Mumwe murume anoongorora Bhaibheri akataura nezvepfungwa iyi achiti: “Dhoo remwoyo womunhu harina mubato wokunze. Rinotofanira kuvhurwa nomukati.” Kana tikashumira Jehovha nerudo zvichibva pamwoyo, tinenge tatovhura dhoo iroro. Patinodaro, tinenge tichitomupa chipo chinokosha zvikuru chekuva vakaperera kwaari, uye izvozvo zvinoita kuti mwoyo wake ufare. Zvechokwadi hakuna chingaenzaniswa nemufaro watinowana patinonamata Jehovha.—Mabasa 20:35; Zvakazarurwa 4:11.
Paunotangazve kunamata Jehovha, chido chako chekuziva nezvaMwari chichazadziswa. (Mateu 5:3) Zvinodaro sei? Vanhu vari munyika vanonetseka kuti, ‘Tiri kumboitei panyika pano?’ Vane nzara yekuda kuziva chinangwa cheupenyu. Vanodaro nekuti Jehovha akasika vanhu vaine chido ichocho. Akatisika kuti tinakidzwe nekumushumira. Hapana chimwe chinhu chingatigutsa kupfuura kuziva kuti tiri kunamata Jehovha zvichibva pamwoyo.—Pisarema 63:1-5.
Tapota, ziva kuti Jehovha anoda chaizvo kuti udzoke kwaari. Ungava sei nechokwadi nazvo? Chimbofunga izvi: Kabhuku kano kakanyorwa pashure pekufungisisa nekunyengetera. Zvichida kakaunzwa kwauri nemumwe mukuru kana kuti nemumwe muKristu. Wakabva wava nechido chekukaverenga uye kushandisa zvirimo. Zvose izvi zvinoratidza kuti Jehovha haana kukukanganwa. Ari kutokubatsira zvinyoro nyoro kuti udzoke kwaari.—Johani 6:44.
Tinogona kunyaradzwa kana tikaziva kuti Jehovha haambokanganwe vashumiri vake vakarasika. Imwe hanzvadzi inonzi Donna yakasvika pakuzvinzwisisa. Yakati: “Ndakasiya chokwadi zvishoma nezvishoma, asi ndaigara ndichifunga Pisarema 139:23, 24, iyo inoti: ‘Ndiongororei, haiwa Mwari, muzive mwoyo wangu. Ndinzverei, muzive pfungwa dzangu dzinonetsa, muone kana mandiri muine chero nzira ipi zvayo yakaipa, munditungamirire panzira isingagumi.’ Ndaizviziva kuti kunyika kwandaiva handiko kwakanga kwakandikodzera nekuti ndaishaya pandainyatsokwana, ndaifanira kuva musangano raJehovha. Ndakatanga kuona kuti Jehovha akanga asina kumbondisiya; ini ndini ndaingofanira kutsvaga nzira yekudzoka kwaari. Ndinofara zvikuru kuti ndizvo zvandakaita!”
“Ndakatanga kuona kuti Jehovha akanga asina kumbondisiya; ini ndini ndaingofanira kutsvaga nzira yekudzoka kwaari”
Tinonyengetera nemwoyo wose kuti newewo uwanezve “mufaro waJehovha.” (Nehemiya 8:10) Hauzombofi wakademba kuti wakadzokerei kuna Jehovha.
Mhinduro Dzemibvunzo Ingava Nevaya Vanoda Kudzoka Kuna Jehovha
Munhu anga achirwara anogona kutora nguva asati atanga kuita zvinhu zvaaisiita zvizere. Saizvozvowo, unogona kusimbazve semuKristu kana ukatanga nekudya zvokudya zvine chokuita nekunamata zvishomanana pazuva. Usafunga kuti unofanira kubva wangotanga nekuita zvese. Zvimwe unogona kuita maminitsi mashomanana uchiverenga Bhaibheri kana kuteerera rakarekodhwa, kudzidza rimwe remabhuku edu, kuenda panzvimbo yekubudisira mashoko paIndaneti yejw.org, kana kuti kuona imwe purogiramu patv.jw.org. Uyewo edza kupinda musangano weungano nekukurumidza. Chikuru kupinda zvose, nyengetera kuna Jehovha uchikumbira kuti akubatsire. ‘Kanda kuzvidya mwoyo kwako kwose paari, nokuti iye ane hanya newe.’—1 Petro 5:7.
“Pandakamborega kuita mabasa ekunamata, ndainzwa ndichinyara zvekutadza kana kunyengetera. Pandakazoshinga kunyengetera, mumwe mukuru wemuungano medu akabva andishanyira. Akandibatsira kuona kuti Jehovha akanga asina kundirasa. Mukuru wacho akandikurudzira kuti nditange nekuverenga Bhaibheri zuva nezuva. Pandakadaro, ndakabva ndawana simba rekuti nditangezve kupinda misangano. Nekufamba kwenguva, ndakatanga kuparidza zvekare. Ndinofara zvikuru kuti Jehovha akaramba achindiitira mwoyo murefu.”—Eeva.
UNGANO ICHANDITAMBIRA SEI?
Iva nechokwadi chekuti vanhu vari muungano vachakutambira nemufaro. Panzvimbo pekukushora kana kukupa mhosva, vacharatidza kuti vanokuda uye vachaedza zvese zvavanogona kuti vakukurudzire.—VaHebheru 10:24, 25.
“Ndainyara kuenda kuImba yoUmambo. Ndainetseka kuti hama dzechiKristu dzaizondibata sei. Imwe hanzvadzi yedu yakwegura yaiva iri muungano iyi makore 30 akapfuura yakanditi: ‘Titambire mwanangu!’ Mashoko iwayo akandibaya mwoyo. Zvechokwadi kudzoka kuungano kwainge kudzoka kumba.”—Javier.
“Ndakaenda kuImba yoUmambo ndikagara nechokumashure ndichiitira kuti vanhu vasandizive. Asi vakawanda vakandiziva nokuti ndakanga ndambopinda navo misangano ndichiri mudiki. Vakandigamuchira vachindimbundira noushamwari zvokuti ndakanzwa ndanyatsodekara. Ndaiita semwana akarasika adzoka kumba.”—Marco.
VAKURU VACHANDIBATSIRA SEI?
Vakuru vachakubata zvakanaka. Vachakurumbidza zvikuru kuti uri kuratidza chido chekukuchidzira “rudo rwawaiva narwo pakutanga.” (Zvakazarurwa 2:4) Vachakubatsira nengoni kuti ugadzirise zvawakakanganisa, uye vachazviita “nounyoro.” (VaGaratiya 6:1; Zvirevo 28:13) Vakuru vanogona kuronga kuti mumwe munhu adzidze newe, zvimwe achishandisa mabhuku akadai saSwedera Pedyo naJehovha kana kuti “Rambai Muri Murudo rwaMwari.” Iva nechokwadi chekuti vakuru vachakunyaradza uye kuti vacharamba vachikutsigira.—Isaya 32:1, 2.
“Kwemakore masere andakanga ndisingaiti mabasa echiKristu, vakuru vaigara vachiedza kundibatsira. Rimwe zuva, mumwe mukuru akandiratidza mapikicha atakambotorwa tese. Mapikicha iwayo akandidzora ndangariro zvokuti ndakatanga kushuva mufaro wandaiwana pandaishumira Jehovha. Vakuru vakandibatsira kuti ndivezve nepurogiramu yekuita zvinhu zvekunamata.”—Victor.
Bhuku redu renziyo, Imbirai Jehovha, rine nziyo dzakawanda dzinonakidza dzinogona kukunyaradza uye kukukurudzira pauri kutangazve kunamata Jehovha. Somuenzaniso, chimbofunga nezvemashoko erwiyo nhamba 60. Rwiyo urwu runobva pana 1 Petro 5:10 uye rune musoro unoti, “Achakusimbisa.”
Nei Jehovha akakupa chokwadi
Akakudana ubve murima?
Akaona chido chaiva mumwoyo
Mwari akapa Mwanakomana wake,
Saka anoda kuti ukunde.
Zvaasina kutinyima Mwana wake,
Achakupa simba raunoda.
Haazokanganwi rudo rwako;
Mwari akakutenga neropa raJesu.
Achavazve newe, achakudzivirira.
Kuti unzwe dzimwe nziyo dzeUmambo, enda pakanzi MABHUKU > MIMHANZI.